Himalaya Dainik » कांग्रेसका आधा महासमिति सदस्य हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा, नेतृत्वले के गर्ला ?
कांग्रेसका आधा महासमिति सदस्य हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा, नेतृत्वले के गर्ला ?
नेपाली कांग्रेसका झन्डै आधा महासमिति सदस्य हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिएका छन्। बैठकमा उपस्थित ७ सय १५ जना महासमिति सदस्यले धर्मनिरपेक्षता हटाएर देशलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कांग्रेसले आफ्ना सभापति सुशील कोइराला प्रधामन्त्री हुँदा संविधान निर्माण भएकोमा गर्व गर्दै आएको छ। तर सोही संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षाबारे भने देशको मूल कानुनमा बाझिने गरी हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग गरिएको हो।
‘२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको एजेन्डा धर्मनिरपेक्षता थिएन। नेताहरूले त्यसै धर्मनिरपेक्षता घुसाइदिए,’
हिन्दु राष्ट्रका लागि कांग्रेसले आधिकारीक निर्णय गरेर हस्ताक्षर अभियान चलाएको भने होइन। पार्टीलाई दबाब दिन महासमिति सदस्य, पार्टी सभापतिहरू र समर्थकको हस्ताक्षर संकलन गरेकाा हुन्।
‘शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाललगायत आठ जना केन्द्रीय सदस्य, सात सयभन्दा बढी महासमिति सदस्य, एक हजार आठ सय समर्थक, ३० जिल्ला सभापतिले हस्ताक्षर गरेका छन भने धेरैले मौखिक सहमती समेता दिएका छन् ।
दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा उभिउनुपर्ने अभियान चलाएका थिए। पहिला खड्का समूहमा रहेका केन्द्रीय तथा महासमिति सदस्य हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्नेमा छन्।
हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताउने गरेका महामन्त्री शशांक कोइरालाले मौखिक सहमति जनाए पनि हस्ताक्षर भने गरेका छैनन्। महासमिति सदस्यहरुले दवाब दिएपनि कांग्रेस नेतृत्वले यश बिषयलाई कसरी अघि बढाउछ, के गर्छ अन्योल नै छ ।